कक्षा-१२ को परीक्षा चरणबद्ध रूपमा गर्ने तयारी, यी हुन् विकल्प – Makalukhabar.com
मकालु खबर	 २०७७ भाद्र २३ गते प्रकाशित 165 0
काठमाडौं । कोरोना जोखिम लामो समय रहने देखिएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा-१२ को स्थगित परीक्षा चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्नेलगायत विकल्पसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
सातवटै प्रदेशका सरोकार पक्षसँग छलफल गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन सचिवालयले बोर्डमा बुझाएको छ । बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा चरणबद्ध रूपमा परीक्षा सञ्चालनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसबाहेक ओपन बुक पद्धति अपनाउने, त्यसमा पनि कक्षा–११ को नतिजालाई केही आधार मान्ने गरी परीक्षा लिने र अनलाइनबाट प्रश्न पठाएर विद्यालयले परीक्षा लिने विकल्प प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
अझै ढिलो गर्दा हिमाली भेगमा हिउँदमा परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिन हुने र शैक्षिक सत्रसमेत जोखिममा पर्ने भएकाले छिटो गर्नुपर्ने सुझाब प्रतिवेदनमा छ । केही सरोकारवालाले अवस्था सामान्य भएपछि परम्परागत रूपमै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाब पनि दिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले बताए । तर, अवस्था कहिले सामान्य हुन्छ भन्ने यकिन नभएका कारण प्रतिवेदनले अन्य विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको हो । ‘बोर्ड बैठकले कुन विकल्पलाई प्राथमिकता दिने भन्ने तय गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,’ प्रा.डा. पौडेलले भने, ‘हामीले प्रस्ताव गर्ने हो, सरकारले गर्ने निर्णयअनुसार परीक्षा व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ ।’
यस्तै, विद्यार्थीलाई इमेलमार्फत प्रश्नपत्र पठाउने र घरमै बसेर उत्तर लेखेपछि उत्तरपुस्तिका विद्यालयमा बुझाउने ओपन बुक प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ । अनलाइनबाटै प्रश्न पठाएर विद्यालयबाट परीक्षा लिन अर्को सुझाब दिइएको छ । विद्यालयमै परीक्षा लिँदा भिड हुने भएकाले यो विकल्पमा सरोकारवालाहरू एकमत देखिएका छैनन् । धेरै विद्यार्थीसँग इन्टरनेट सुविधा नभएको, भएकाहरूसँग पनि गुणस्तरीय सेवा नभएका कारण अनलाइन प्रणालीको परीक्षालाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिइएको छैन ।
कोरोना भाइरसका कारण स्थगित एसइईको नतिजा आन्तरिक मूल्यांकन विधिबाट प्रकाशन गरिसकिएको छ । कक्षा–११ को परीक्षा पनि विद्यालयले आन्तरिक परीक्षा लिएर ग्रेडसिट दिने निर्णय भइसकेको छ । कक्षा–१२ को परीक्षा भने पाँच महिनापछि धकेलिँदा पनि विकल्पमा कुनै निर्णय भएको छैन । कक्षा–११ र १२ मा करिब नौ लाख ६४ हजारले परीक्षा फारम भरेका थिए । तीमध्ये कक्षा–१२ मा चार लाख ३१ हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी छन् ।
दोस्रो चरणमा ‘एल्लो जोन’मा परेका दुई सयभन्दा कम कोरोना संक्रमित भएका जिल्ला र एक सयदेखि दुई सय विद्यार्थी भएका विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव छ । यस्तै, तेस्रो चरणमा दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय पर्नेछन् । त्यस्ता विद्यालयको संख्या कम छ । प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तयारी अवस्थामै रहेकाले पहिलो चरणको परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिन नरहेको पदाधिकारीको भनाइ छ । –नयाँ पत्रिकाबाट
मकालु खबर 1807 खबरहरु0टिप्पणीहरू
चितवनमा मकवानपुरकी कोरोना संक्रमित किशोरीको मृत्यु
तपाईंको जिल्लामा आज कति संक्रमित थपिए, कतिको मृत्यु भयो ? (हेर्नुहोस् जिल्लागत विवरण)